Ọganihu nyocha nke ihe arụ ọrụ nanocellulose na ngwa ha - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd., Ltd.
Ọganihu nyocha nke ihe arụ ọrụ nanocellulose na ngwa ha
Nanocellulose bụ akụ kacha baa ọgaranya n'ụwa. Ọ nwere uru nke nbibi dị mfe, mmeghari ohuru, adịghị egbu egbu, ọnụ ala ma dịkwa mfe ịnweta, a na -atụkwa anya na ọ ga -edochi akụrụngwa mmanụ ala ọdịnala wee jiri ya wepụta ngwa ọrụ dị iche iche dị elu nwere nnukwu uru. Dị ka usoro nkwadebe na isi mmalite nke nanocellulose, nanocellulose nwere ike kewaa ụzọ atọ: nanocrystalline cellulose (CNC), cellulose nanocellulose (CNF) na cellulose nje (BC).
Ọgụgụ 1. Isi mmalite, microstructure na ngwa nwere ike nke nanocellulose
Nanocellulose ihe eji arụ ọrụ maka photonics chiral
Chirality juru ebe niile na -arụ ọrụ dị mkpa na sayensị ndụ na sayensị ihe. CNC bụ ihe nanometer chiral photonic crystal material. Ọdịdị chiral nematic liquid crystal phase nke CNC enweghị ike iji ya kwadebe ihe nkiri ihe eji arụ ọrụ nwere akụrụngwa dị elu yana ngwa anya pụrụ iche., mana a ga -ejikwa ya dị ka ụdị ndebiri nro dị nro iji kpalite nanoparticles iji mepụta ihe arụ ọrụ nwere usoro chiral. Ya mere, catalysis chiral, ụdị chiral metamaterials, izo ezo polarization na biosensing nwere uru ngwa dị mkpa.
Ọgụgụ 2. Ngwa nke nanocellulose ihe na -arụ ọrụ na photonics chiral
Nanocellulose ihe eji arụ ọrụ maka ndị ọkwọ ụgbọala ngwanrọ
N'afọ adịbeghị anya, ndị ọkà mmụta sayensị ejirila aghụghọ mepụta ụdị ihe dị iche iche biomimetic nwere ọgụgụ isi dabere na ihe dị nro sitere na polymer sịntetị dị iche iche, dị ka hydrogels na -ahụkarị, elastomers mmiri mmiri kristal na -akpụzi polymers ebe nchekwa, i imitateomi ma ọ bụ ọbụna karịa omume ịkwọ ụgbọala nke ihe ndị dị ndụ. Otú ọ dị, a na-ejikọkarị ihe ndị a sitere na polymer site na usoro dị mgbagwoju anya, dị oke ọnụ ma sie ike iweda ma ọ bụ imegharị, nke nwere ike itinye ụfọdụ ibu na gburugburu. Ọ dị mma ịmara na ndị ọkwọ ụgbọ ala sọftụwia biomimetic dabere na nanocellulose adọtala nlebara anya karịa n'ihi ike mgbanwe igwe ha dị elu., elu mmiri absorption ike, nkwado ma ọ bụ gburugburu ebe obibi, reusable or biodegradable na biocompatibility.
FIG. 3. Ngwa nke nanocellulose dabere na arụ ọrụ arụ ọrụ n'ọhịa ọkwọ ụgbọ ala
Nanocellulose ihe eji arụ ọrụ maka nchekwa ike
Nanocellulose nwere nnukwu akụkụ elu akọwapụtara nke ọma, magburu onwe n'ibu mgbanwe, ezigbo nguzozi kemịkal na ịdị mma gburugburu, a na -ejikọkwa eriri ndị ahụ n'otu n'otu. Ọ dị mfe imepụta usoro adịghị mma maka njem ion na elektrọn. A na -ejikọ otu arụ ọrụ hydrophilic dịka otu hydroxyl na otu carboxyl n'elu eriri ahụ, nke nwere ikike njigide mmiri dị mma na ngwọta electrolyte, ime ihe arụpụtara arụpụtara nwere atụmanya ngwa dị ukwuu na nchekwa nchekwa ike. Agaghị eji ihe arụ ọrụ dabere na Nanocellulose dị ka akụkụ dị iche iche nke ngwaọrụ nchekwa ike, dị ka diaphragm, electrolyte, nrapado na onye na -ebu ya. N'otu oge ahụ, nnukwu okpomọkụ carbonization, enwere ike iji polymerization kemịkalụ na atụmatụ itinye ihe ọkụkụ wee jikọta ya na ihe electroactive iji nweta ezigbo ihe nrụpụta yana ọmarịcha akụrụngwa electrochemical..
Ọgụgụ 4. Ngwa nke nanocellulose dabere na ihe eji arụ ọrụ n'ọhịa nchekwa ike
Nanocellulose ihe eji arụ ọrụ maka ngwa biomedical
N'ala akọrọ, ihe eji arụ ọrụ nke nanocellulose dị ka ọkpụkpụ mmadụ, mgbe ọ nọ na mmiri mmiri, ihe anụ ahụ na kemịkal nke nanocellulose yiri matriks extracellular. Ka ọ dịgodị, na mgbakwunye ọmarịcha anụ ahụ na kemịkal, nanocellulose nwere nnukwu ndakọrịta na polymer ndị ọzọ ma ọ bụ ihe arụ ọrụ, nke na -eme ka ihe arụ ọrụ nanocellulose nwee ezigbo uru bara uru yana atụmanya ngwa ngwa n'ọhịa biomedical.
Ọgụgụ 5. Ngwa nke nanocellulose dabere na ihe eji arụ ọrụ n'ọhịa biomedical
(Isi mmalite: N'ihu na Polymer Science)
Peeji nke ụlọ & quot; etiti ozi" ozi teknụzụ ndị nyocha China ewepụtala akwa metamaterial efu efu nke enwere ike eyi iji mee ka ahụ jụrụ oyi.
Ọkwa mmepe na atụmanya ngwa nke akwa elektrọnik nwere ọgụgụ isi (M) -- ụkpụrụ ọrụ na usoro mmepe nke akwa elektrọnik nwere ọgụgụ isi
Nwepu © 2019 Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd., Ikikere ikike.